नेपालगन्ज कप सातौ दिन : रोल्पा गोरिल्लाज र बर्दिया टाइगर्स बिजयी ! | Cricket Himalaya |
By Bhanu Sigdel Last updated May 28, 2018 840
बैशाख ९, क्रिकेट हिमालय
नेपालगन्ज कपको सातौ दिनको खेलमा पप्पु कन्सट्रक्सन रोल्पा गोरिल्लाज र अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गस बिजयी !
टस जितेर पहिला ब्याटिंग रोजेको रोल्पा गोरिल्लाजका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान रोल्पाका कप्तान सौरभ खनालले २७ रन, भिम सार्कीले २३ रन त्यस्तै आकाश थापाले २९ रन र नन्दर यादवले ४० रन जोडेका थिए । निर्धारित २० ओभर पुरा खेल्दै ७ विकेटको क्षतिमा १४१ रन जोडेको हो । एबरोल टी एम टी लुम्बिनी यात्रीजका लागि सोम शर्माले सर्वाधिक ३ ओभरमा १९ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । जितका लागि १४२ रनको लक्ष्य पाएको एबरोल टी एम टी लुम्बिनी यात्रीजले अन्तिम ओभरमा आएर खेल गुमाएको थियो । लुम्बिनीका कप्तान कृष्ण कार्कीले ३५ बसिर अहमदले २४ रन तथा कुसल मल्ल तथा विशाल खत्रीले समान २०, २० रन जोडेका थिए । पप्पु कन्सट्रक्सनका बलर भिम सार्कीले १९.५ बलमा अन्तिम ब्याट्सम्यानका रुपमा बसिर अहमदलाई आउट गराउदै टिमलाई जित दिलाएका थिए । अन्तिम ओभरमा भिम सार्कीले २ विकेट लिएका थिए ।पप्पु कन्सट्रक्सनका लागि बसन्त कार्कीले समेत २ विकेट लिएका थिए ।
खेलमा २३ रन तथा २ विकेट लिन सफल पप्पु कन्सट्रक्सन रोल्पा गोरिल्लाजका भिम सार्की म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गसले ७ विकेटले जितेको छ । टस जितेर फिल्डिंग रोजेको अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गसले जिसान बांके ब्लास्टरलाई ब्याटिंगको निम्तो दिएको थियो । बांके ब्लास्टरका लागि ओपनर तथा कप्तान महेश क्षेत्रीले नटआउट ४८ रन बनाए भने अर्का ओपनर विपिन रावलले २३ रन जोडे । त्यस्तै विशाल के.सि ले १६ तथा रोमन बलमे १३ रन जोडे । २० ओभर पुरा खेल्दै ६ विकेटको क्षतिको १४० रन बनाएका थिए ।बर्दिया टाईर्गसका लागि दुर्गेस गुप्ता तथा भरत थापाले समान २,२ विकेट लिए । अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गसले १८.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाउदै जित निकालेको थियो । जस्मा कप्तान सुवेन्दु पाण्डेले नट आउट ३५ बलमा ४६ रन, राजवीर सिंहले ३५ बलमा ४३ रन बनाए तथा विश्वास श्रेष्ठले १९ रन जोडे । खेलका म्यान अफ द म्याच ४६ रन बनाएका अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गसका कप्तान सुवेन्दु पाण्डे घोषित भए ।
६ वटा टीम रहेको प्रतियोगितामा प्रत्येक टिमले ५ वटा खेल खेल्ने छन् । सोमवार लिग खेलमा आफनो अन्तिम खेल एन आई सि एसिया दंगाली गोर्खाज र आर्शिवाद पेन्ट्स पाल्पा योद्याज बिच तथा एबरोल टी एम टी लुम्बिनी यात्रीज र अर्घाखाची सिमेन्ट्स बर्दिया टाईर्गस बीच रहेको छ । आफनो ५ खेलमा ४ वटा जित संगै पप्पु कन्सट्रक्सन रोल्पा गोरल्लाज सिर्ष स्थानमा रहेको छ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल १२ गते हुने छ ।प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहेका २ टिम फाइनलमा भिड्ने छन् । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख १० हजार तथा ंंउप विजेताले साठी हजार पाउने आयोजकले जनाएका छन् ।
#Bardiya Tigersnepalgunj cupRolpa Gorillassubendu pandey
दिपक गुप्ता मेमोरियल टि-२० चौथो दिन : फोनिक्स क्रिकेट क्लब र त्रिभुवन आर्मि क्लब बिजयी !